Zumba dia mamadika ny efitrano fandraisam-bahiny ho toy ny gorodon'ny dihy ao an-trano
Fampiofanana fohy sy matevina ary fotoam-pivoriana maharitra
Azonao atao aloha ny mametraka ny fototra amin'ny hafainganana. Ny mpandihy tsirairay dia tsy mila toerana malalaka, noho izany dia azo atao ihany koa ny fampiofanana Zumba amin'ny efitrano kely.
Fanampiny iray hafa ho an'ny Zumba ao an-trano dia ny halava samy hafa amin'ireo singa samihafa. Ireo izay manam-potoana kely nefa te-hanao zavatra ho an'ny fahaizany sy ny vatany alohan'ny asa dia afaka mampiasa ny iray amin'ireo "programa mazava".
Dorana ny kaloria ary ampiofanina ao anaty 20 ka hatramin'ny 30 minitra ny hozatra. Ny choreografie sasany izay manome fiofanana hozatra kibo manokana dia fohy ihany koa. Tsy toy ny fandaharana maro hafa ho an'ny vavony, tongotra sy vodin-javatra ireo, tsy atao amin'ny tany ireo.
Ohatra, misy fanazaran-tena izay fanazaran-tena amin'ny seza mahazatra. Izany rehetra izany, mazava ho azy, miaraka amin'ny mozika mifanaraka amin'izany ary amin'ny alàlan'ny fanampiana dihy sy fialamboly hatrany.
Ny be lavitra kokoa, etsy ankilany, dia ireo programa kardio isan-karazany, lanonana fandihizana mivantana na fampihetseham-batana misy kojakoja manokana toy ny "Rizer" (zana-tohatra boribory) na kibay (tononkalo kely izay maneno ihany koa ary manome feo mety mandritra ny fanazaran-tena). Ny fotoana ilaina eto dia manodidina ny adiny iray.
Amin'ny maro amin'ireo DVD, Alberto (antsoina hoe Beto) dia mitarika an'i Perez manokana. Ny mpanazatra kôlôjianina Kolombiana no mpamorona ary nisoratra anarana ny marika Zumba tamin'ny 2001. Izay mahatsapa fa nantsoina handihy ny choreografiny manokana ao an-trano izy ireo, dia hahazo feo mifanaraka aminy miaraka amin'ireo CD mifanaraka aminy.
Raha tsy izany dia tsara ihany koa ireo hira "tsara fanahy" amin'ny fahazotoana manao fialantsasatra na fety fahavaratra.
Noho izany misy antony marobe amin'ny Zumba ao amin'ny efitranonao manokana. Ny tena manan-danja indrindra anefa dia mahafinaritra sy toe-po tsara. Ary tsy misy fialantsiny intsony rehefa mihidy ny gym na efa mihidy ...
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 26. Jolay 2021 5. September 2021 Sokajy Fialam-boly & fialamboly, Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tenaKeywords mihetsika, Fitness, hanao fanatanjahan-tena bebe kokoa, Fanatanjahantena, mandihy, workouts, mandihy ao an-trano, Zumba
indray Lahatsoratra taloha: Fialantsasatra amin'ny fotoanan'ny Corona - nefa mitandrema!
more Lahatsoratra manaraka: Hevitra fanomezana lehibe ho an'ny reny ary fanomezana ho an'ny zazalahy kely